Misheni & Maitiro | KarmanHealthcare.com
Mission - Kunaka kuburikidza Mobility
Karman® ndiye mutungamiri wepasirese mukusimudzira, dhizaini, kugadzira uye kugovera zvinyorwa mavhiripu, simba rakamira mavhiripu, kurereka muchadenga mavhiripu uye zvose wiricheya zvigadzirwa zvine chekuita nezvese zvako Mobility zvinodiwa. Karman anogadzira zvigadzirwa muzvivakwa zvedu muUnited States, China, Taiwan, neThailand. Zvigadzirwa zvedu zvakakosha, zvinotengeswa pasi peKarman® uye Karma® zvigadzirwa zvemakambani, zvinotengeswa kuburikidza nenetiweki yevanochengeta kumba zvigadzirwa zvevatengesi kana vagoveri munyika dzinopfuura makumi maviri nembiri. Karman inotungamirwa muNorth America muGuta reIndasitiri, California.
Our Quality urongwa
Karman akazvipira kusimudzira hupenyu hwevanhu nekupa hunyanzvi, hwepamusoro-Quality Mobility zvigadzirwa nemasevhisi anodarika zvinotarisirwa nevatengi. Isu takazvipira zvakaenzana kuremekedza nharaunda uye kutevedzera zvese zvinotarisirwa. Tekinoroji, kubatana, uye kuvandudza kunopfuurira kuburikidza nevanhu-vakatarisa vanhu nemaitiro ndiyo hwaro hwekuzadzisa izvi zvipikirwa.
Ergonomic Wiricheya Bhurocha
Mutengi wedu anouya kutanga!
Takazvipira kusangana nekupfuura zvinotarisirwa nevatengi vedu zvese zvemukati nekunze. Isu takazvipira kuvaka hukama hwakavakirwa pakuvimba kuburikidza nekukurumidza uye kwehunyanzvi kupindura kune zvese zvatinoda zvevatengi vedu.
Kubatana pamwe chikamu chakakosha chebhizinesi redu!
Kubatana uye kukurudzira kuburikidza nekutaurirana kuzadzisa zvinangwa zvebhizinesi redu. Isu tinokurudzira timu inovaka uye inoshandira kuburikidza nehutungamiriri kuyedza kuvandudza mhedzisiro. Funga vatengi vedu vemukati uye tipe rutsigiro, nhungamiro, kurudziro uye mhinduro inovaka pazvinenge zvichidiwa.
Tora mutoro uye muridzi!
Ratidza kutsunga uye kutanga uye upe kukosha kwakawedzerwa kuna Karman. Chengetedza kune zvibvumirano uye rondedzera kutsauka panguva yakakodzera kuti uwane mhinduro. Batanidzwa uye ratidza mhedzisiro. Yakatsanangurwa yakatarisana nekambani.
Edza kuramba uchivandudza!
Karman neayo Affiliates anoramba achirondedzera zvakare bhizinesi redu uye vari kushingairira mukupa zvigadzirwa zvitsva uye zvinobudirira, maitiro uye mhinduro. Isu tinokurudzira vatinoshamwaridzana navo kuvhura kune ese matsva mazano anogona kuvandudza bhizinesi redu uye nehupenyu hwevatengi vedu.
Kuzvipira kwedu ndekwe "Kuvandudza Hupenyu hweVanhu nekuwana Kugonesa kuburikidza Mobility"!
Takazvipira kuita mibairo inoshamisa mazuva ese mune zvese zvatinoita isu pachedu uye sekambani. Takazvipira padanho repamusoro re Quality uye inoratidzwa zvese mune zvigadzirwa zvedu nemasevhisi.